Ampitahao ny fahasamihafana misy eo amin'ny teny mitovy | Fahasamihafana Ampitahao ny fahasamihafana misy eo amin'ny teny mitovy | Fahasamihafana
15 aogositra 2021 Narotsak'i Sethmini
Tsy misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny ronono feno ronono sy ronono manontolo. Ny rononon-dronono feno dia ilay teny ampiasaina hivarotana ronono izay manana tavy mitovy amin'ny ronono manontolo. Ny ronono iray manontolo dia manankarena otrikaina misy tsiro malefaka sy endrika ary manome zava-pisotro misy kaloria kely miaraka amin'ny tombontsoa ara-pahasalamana maro. Izy io koa dia mahery […]
Filed Under: Fisotroana
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny asidra metabolika sy ny alkalosis metabolika dia ny fihenan'ny metabolic acidosis ny fihenan'ny pH ny vatana noho ny fihenan'ny fatran'ny serum bicarbonate na ny fiakaran'ny fatran'ny ion hidrôzenina serum, raha ny alkalosis metabolika kosa dia ny fiakaran'ny toetran'ny vatana noho ny fiakarana. amin'ny fifangaroan'ny bicarbonate serum na mihena […]
Ny mahasamihafa azy eo amin'ny takamoa sy ny rhizome dia ny bolam-boalavo dia zana-ketsa ambanin'ny tany misy ravin-koditra manify maniry eo aminy, raha ny rhizome kosa dia ampahany amin'ilay fotony lehibe maniry mitsivalana ambanin'ny tany. Ny takamoa, corms, tubers, ary rhizome dia ampahany anana amin'ny zavamaniry izay manampy ny zavamaniry hiaina anaty toe-javatra mafy. Bulbs […]
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny spectrum mitohy sy ny fikajiana tsipika mamirapiratra
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny spectrum mitohy sy ny spectrum tsipika mamirapiratra dia ny tsy fisian'ny tsipika madiodio ao anaty spectrum mitohy fa misy tsipika misaraka amin'ny spektrum mazava. Ny fikajiana mitohy dia andian-danja azo raisina amin'ny habetsaky ny vatana, tsy manana elanelana be eo anelanelan'ny sanda tsirairay. Tsipika mazava […]
Fahasamihafana eo amin'ny fidinana ambany sy ny fiakaram-po
Fahasamihafana eo amin'ny Angiotensin 1 sy 2
Fahasamihafana eo amin'ny kalitao sy ny sandany
Fahasamihafana eo amin'ny Immunofluorescence sy Immunohistochemistry
Fahasamihafana eo amin'ny Pallet sy Skid